इतीहासमा माहामारीका लहर कारण अनी समापन डा. केदार कार्की – www.agnijwala.com
निवृत प्रमुख भेर्टेनरी जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रीपुरेश्वर
मानव सभ्यताको अभिलेखित इतिहासमा धेरै जसो भयंकर महामारीहरुको प्रकोप कैयौ बर्ष रहिरहेका थिए । रोमन सामराज्यलाई निशाना बनाउने एन्टोनाइन प्रेल्गले १६५ ईश्वी मा पहिलो पटक आक्रमण गरेको थियो । रोमन सम्राट मार्कस ओरेलियस आफै यस्को शिकार भए । एन्टोनाइन ्रेल्पेगको असर १८० ईश्वी सम्म रहयो । कालो र्मत्युको नामले कुख्यात न्युमोनिक प्रेल्ग को प्रकोप पनि चार वर्ष रहेको थियो । युरोपीयन देशमा यो महामारी वर्ष १३४७ देखि १३५० सम्म कहर मच्चाउदै रहयो । जुन इलाकामा यो रोग फैलियो त्यहा यस्को असर धेरै दिनसम्म रहेको थियो । त्यहाको जनसमुदायलाई पुरै बर्बाद गरे पछि यो महामारीले अर्को तर्फ आफ्नोबाटो लागेको थियो । वर्ष सन १८३१ देखिदेखि १८३७ सम्म पुरै युरोपमा फलुको महामारीले उत्पात मच्चाएको थियो । यस महामारीको तीन ठुला हमला वा लहर देखिएको थियो जुन सन १८३१, १८३७ मा आएको थियो । सन १८८९ मा आक्रमण गर्ने फलुको महामारी करिवन २ वर्ष सम्म जनसमुदायलाई आफ्नो चपेटामा लिर्दै रहयो । यस फलु बाट ३ लाख ७० हजार मानीसहरु मारिए । इ.स. १९१८मा बैश्वीक रुपमा फैलिएको स्पेनिश फलुको महामारी अहिले सम्मको सवभन्दा बढी क्षती तवाही गराउने महामारी थियो । मार्च १९१८ देखि नोभेन्वर १९१९ सम्म स्पेनीस फलुको तीन वटा लहर देख्न पाइएको थियो । जसले दुनियाभरमा पाँच करोड भन्दा बढी मानीस मारीएका थिए । यस महामारीको प्रत्येक लहर पछिल्लो भन्दा यदि ज्यादा नभए पनि कम खतरनाक पनि थिएन ।
यदयपी स्पेनिश फलुको पहिलो पकोप बारेमा सन १९१७ मा अनुसन्धान कर्ताहरुको दुई बेग्ला वेग्लै समुहरुले पत्ता लगाएका थिए । जती बेला तपाई लेख पढ्दै हुनुहुनेछ त्यसवेला कोवीड –१९ ले आफ्ना तेश्रो कैलेन्डर वर्षमा प्रवेश गरी सकेको हुनेछ किनकी यस महामारीको पहिल्लो वर्ष २०१९ को आखीरी महिनामा आएको थियो । यस पछि कोरोना भाइरसको महामारी वर्ष २०२० मा बडो तेजीले पुरै विश्वमा फैलियो । अव साल २०२१ को ४ महिना वित्न विति सकन लागेको छ र अहिले पनि यो महामारी विश्वका सवै देशहरुमा बितण्डा मचाई राखेको छ । कोरोना भाइरसले पुरा विश्वमा २८ लाख भन्दा बढी जनसमुदायको ज्यान लिई सकेको छ । महामारीहरुको इतिहास हेर्दै हामी विश्वाशका साथ यो भन्न सक्तछौ की कोवीड –१९ महामारीको व्यवहार असामान्य चाहि होइन यस्को लहरहरु पटक पटक आउनु कुनै पनि महामारीको सहज व्यवहार चाहि नै हो, किनभने अहिले पनि वैश्वीक रुपमा महामारीको शिकार भएका जनसमुदायको संख्या बढ्दो छ । धेरै जसो विशेषज्ञहरुको मान्यता छ कि पहिलेको महामारीहरु जस्तै कोवीड–१९ पनि आखीरमा गएर मौसमी विमारीमा परिणित हुने छ ।
महामारीको लहरहरुको जिम्मेवार कारण ः
महामारी को प्रसारमा आउने उचार चढावको लागी कैयौं कारराहरुलाई जिम्मेवार मानिएको छन् । दाईभाई तथा साथीहरुले सन १९१८ को स्पेनिस फलुको तीन चरण भएको एउटा साधारण मोडेल प्रस्तावीत गरेका थिए । यी तीन चरण भएको एउटा साधारण मोडेल प्रस्तावीत गरेका थिए । यी तीन चरण यस प्रकारका छन् ।
३) महामारीको बेला मानिसको व्यवहारमा आउने परिवर्तन
त्यहि किसलर र उनका साथीहरुले महामारी पछि नयाँ कोरोना वायरस सार्स कोभ –२ को संक्रमणका लागी निम्नालिखित कारणहरु परिचान गरेका छन् ः– सक्रमणको बेला मौसम कोसार्थ उचार चढाव जनसमुदायहरुको रोग प्रतिरोधक क्षमता, नया कोरोना भाइरस र अन्य कोरोना भाइरस प्रति जनसमुदायहरुमा प्रतिरोधक क्षमताको स्थिीती, महामारी रोक्नका लागी चालीएको कदम कती सक्कडा छ र कहिले लागु गरिन्छ ।
दोश्रो लहर को प्रमुख कारण महामारी देखि डर त्रास नभएको कारण जनसमुदायहरुमा नियमहरु मिच्ने व्यवहार महामरी कारण लगाइएको प्रतिवन्धिहरु बाट अश्रालीनु, आत्तीनु , स्रक्रमित जनसमुदायहरु ज्स्को पत्ता लागेन तथा स्प्रेडरा भाइरस कोम्युटेशन एउटा अर्को कारण छ जस्ले तीनलाई एक पटक फेरी महामारीको शिकार बनाउछ जो पहिले यस भाइरस बाट स्रक्रमित भइसकेका थिए । नया कोरोना भाइरसले कैयौ म्युटेट मा आफुलार्य बदलिन सक्ने क्षमता देखाएको छ । केहि म्युटेशन पछि बढि संक्रमक भएको देखिएको छ । भारतमा भनिनथालीएको छ कि करिव २० प्रतिशत नया विरामीहरु इस भाइरस को दोहरो म्युटेट भएको भाइरसको परिणम हो । यस बाहेक ब्रिटेन र दक्षिण अफ्रीका अनी ब्राजीलका भेरीएन्टको कथा पनि बेग्लै छ ।
महामारी बाट संक्रमित जनसमुदायको सख्यामा उतार चढाव यी सवै कारणहरुको आपसी तर पेचीलो सम्वन्ध हरुको परिणाम हुने गर्दछ । महामारीको प्रकोपको केहि अरु खास कुराहरुको पहिचान गरीएको छन् उदाहरणका ागी १९१८ को स्पेनिश फलु महामरी माथिी गरिएको अध्ययनहरुमा थाहा लाग्यो कि यस मामारीले पहिले गरिवहरु माथिी आक्रमण गरेको थियो यस्को निशानामा धनीहरु प्छि परे यसबाट भारतको मुंबइ शहरम कोवीड –१९ ले पहिले झुडडीझुपडीका जनसमुदायहरुलार्य निशाना वनाएको थियो, अर्थात कोरोना भाइरसको पहिलो लहरले स्लममा बस्ने हरुलाई पहिले आफ्नो चंगुलमा लीयो भने अबको दोश्रो लहरमा बहुमंजीला महलमा बसोवास गर्ने जनसमुदाय भाइरसको शिकार भएका छन् अभिताभ बच्चन अनुपम खेर यस्को शीकार भएकोमा के को आश्चर्य मानी जिब्रो टोकी वस्ने हाम्रो आफ्नो परिवेशमा हाम्रा पूर्व राजा महारानीत परीसके ।
इतिहास बाट प्राप्त भएको शिक्षा ः
महामारीको प्रकोप रोक्नका लागी जुन पाम्पिरिक उपायहरु गरिन्छ तीनमा पिछल्लो कैयौ शत्वदीहरु देखि कुनै परिवर्तन गरिएको छैनन ती सनातनी नै छन् भन्न कुनै आइतबार कुर्न परेन । संक्रमीत व्यक्तिलाई बाँकी जनसमुदायहरु बट वेग्लै राखी तीनको उपचार गर्नु कवारंटिनको उपायहरुबाट महामारीको संक्रमण रोक्ने प्रयास गर्नु सुरक्षाका व्यक्तीगत उपायहरु प्रयोग गर्नु पालन गर्नु । नजसमुदायहरुलाईइ महामारीको बारेम उचीत संवाद सचेतना तथा तीनलार्य सहि जानकारी उपलब्ध गरावउनु ।
यी उपायहरु मध्ये कुनै पनि एउटालाइई लागु गर्नमा हेलचेक्राईको स्थीतीमा महामारीबाट स्थीती बेकावु हुन सक्तछ । यस मामलामा हामीहरु बट कैयौ गल्तीहरु भएका छन् । यही कारणले गर्दा आज भारत कोरोना भाइरसको दोश्रो लहर को नराम्रो सीत शिकार भएको छ । हाम्रो आफ्नो परिवेशमा देशको दक्षिणी खुल्ला सिमानाका कारण त्यस्को असर आज नेपालगंज तीर देख्न सुन्न पाइन्छ । अव पनि न्युनतम व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अवलब्वन हामी आफैले वरेनौ भने हामी आफै पनि यस दुपचक्रबाट सहजै निस्कन सक्ने छैनौ । यस महामारीको वैश्वीक स्तर देखिएको प्रकृति हेर्दा न त यथेपढ मात्रामा स्किा विरुद्ध प्रभावकारी खोपनै विकशीत गर्न सकिएको छ , एउटा लहर लहरम प्रभावकारी देखिएको खोप अर्को लहर मा निष्प्रभावी ।
त्यसैले बुझौ कोवीड –१९ को लहरलाई संझौ कोवीड –१९ को प्रहार लाई ।
फेस मास्क सावुनपानी अनी सेनेटाइजरले निष्कृय पारौ कोवीड –१९ को प्रहारलाई ।
अत ः यस कोवीड –१९ विश्वव्यापी लहरबाट आफु पनि बचौ अरुलार्य पनि बचाऔ सरकारको काम भनेको एउटा विज्ञपती निकाल्नु सम्मत हो ।